Fetiben’ny Bilaogy: Meksika – Vahoaka, Herisetra ary Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2011 16:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, Italiano, عربي, Español
Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny Adin'i Meksika amin'ny zava-mahadomelina ity lahatsoratra ity.
Liana amin'ny famporisihana ny fitorahana bilaogy sy ny fampandrosoana ireo tambajotran'ny mpitoraka bilaogy ny Global Voices amin'ny teny Espaniola, ary tato ho ato dia nanao izany avy amin'ny alalàn'ny ‘Festivales de Blogs‘ (Fetiben'ny Bilaogy) [es]. Hanampy amin'ny fahaterahanà lahatsoratra manokana hanana ny fomba fisainana sy fandinihana avoavo kokoa ity Fetibe ity, ary ireo mpitoraka bilaogy mandray anjara dia samy afaka mahazo tombontsoa goavana avy amin'ny alàlan'ny asan-dry zareo ho mora hita kokoa noho izy ireny hovoizin'ny Global Voices (GV). Ndeha hojerentsika ny antsipirihany tamin'ilay Fetibentsika :
Ho toerana ara-jeografia sy ho foiben'ny Fetiben'ny Bilaogy 2011 voalohany, nisafidy an'i Meksika ny GV, firenena lehibe mamakivaky vanim-potoanan'ny herisetra izay mbola tsy ato ho aho no hitsahatra. Anilan'izany, manana mpiara-miasa maro any Meksika isika izay nanohana antsika tamin'ny fanapariahana ity hetsika “virtoaly” ity. Raha ny ankamaroan'ireo mpitoraka bilaogy, ary ny ankamaroany dia ireo be mpahafantatra, dia hita any amin'ny Tanànan'i Meksika, manantena ihany koa isika ny fandraisana anjaran'ireo mpitoraka bilaogy avy any amin'ireo tanàna tahaka an'i Guadalajra, Monterrey, Puebla, Toluca, Ciudad Juárez sy ireo maro hafa.
Tianay ny manazava fa ny fandraisan'anjara dia tsy noferana ho an'ireo bilaogy na mpitoraka bilaogy izay natokana manokana ho amin'ny lohahevitra voalaza ao anatin'ny fizarana manaraka etsy ambany – afaka mandray anjara daholo ny bilaogy sy ny mpitoraka bilaogy rehetra.
Lohahevitra: Olom-pirenena, herisetra sy bilaogy
Hita foana amin'ireo fiaraha-monin'olombelona ny herisetra, nefa amin'ny tranga sasany dia lasa singa mavesa-danja izany, manapaka ny raisintsika ho fivoarana ara-dalànan'ny fiainantsika. Ny tranga iray amin'izany tanatin'ny ila-bolantany misy antsika dia ny herisetra tany Meksika, nantsoina hoe ‘Adin'i Meksika amin'ny Zava-mahadomelina,’ izay mampiseho ny tsy fahaizantsika, tahaka ny governemanta, hikirakiràna amin'ity olana ity.
Ao anatina hevitra iaingana iray, tahaka ilay iray nosoritana, dia misy foana ireo tantara izay tsy avoaka amin'ny alàlan'ny media tranainy, tantaranà fanoherana izay tokony ho fantatsika rehetra. Kanefa, ilaina ihany ny fisainana ary afaka manontany ny tenantsika isika hoe, fomba fijery toy inona no ananan'ireo Meksikana mpampiasa Aterineto rehefa mijery ny endrika herisetra nforonin'ny iraisam-pirenena ho an'i Meksika? Marina ve izany? Diso tafahoatra ve izany?
Ny media ve, anisan'izany ny Aterineto, manampy amin'ny fampirafesana ireo hevitra sa tompon'andraikitra manakiana?Ampahany amin'ny vahaolana amin'ity vanim-potoana momba ny ady ity ve ny media sa fitaovana bebe kokoa ho amin'ny herisetra fotsiny ihany? Ilaina ve ny fandrindràna ny fomba fandrakofan'ny media ny herisetra? Raha izany, iza no tokony hanao izany: ireo mpamaky, ny media, ireo Fikambanana Tsy Miankina amin'ny Fanjakana sa ny Fanjakana?
Misy ve vokatra azo tsapain-tànana avy amin'ny fanentanan'ireo mafàna fo (na ao amin'ny aterineto na tsia) hisorohana ny herisetra ao Meksika? Nanana fijoroana tamin'ny fisorohana na fam pibaribarianaireo tranganà herisetra ve ny fampiasana ny Aterineto tamin'ny fampidirana tao anaty kajikajy ny hoe tsy ny tranga rehetra akory no nivoaka tamin'ny media tranainy? Afaka sa tokony hihoatra ny asa fandrakofana sy fisainana ireo endrikà media vaovao?
Samy afaka mandray anjara avokoa na ny mpitoraka bilaogy Meksikana mipetraka any an-toerana na tsia, amin'ny famoahana lahatsoratra iray mampiasa ilay lohahevitra any anatin'ny bilaoginy. Afaka mandray anjara ihany koa ireo vahiny mipetraka any Meksika. Tsy maintsy lahatsoratra tsy mbola nisy izany lahatsoratra izany, amin'ny teny hafa, noforonin'ilay mpitoraka bilaogy, fa tsy nadika avy amina loharano hafa, ary navoaka nandritra ny fotoana nolazaina handraisana anjara amin'ny Fetibe. Ny rafitra, endrika sy halavan'ny lahatsoratra dia ny mpitoraka bilaogy no manapa-kevitra ny amin'izany.
Afaka mandray izay fomba hifantohany amin'ilay lohahevitra ny mpitoraka bilaogy. Mety ho avy amin'ny iray amin'ireo fanontaniana natolotra izany na avy amin'izay heverin'ilay mpitoraka bilaogy ho mety. Rehefa namoaka ny lahatsoratr'izy ireo ho an'ny Fetibe ireo mpitoraka bilaogy, tsy maintsy mandefa mailaka any amin'i juan.arellano ao amin'ny globalvoicesonline dot org izy ireo miaraka amin'ireto fampahalalana manaraka ireto :
Rohy na URL mifandraika amin'ny lahatsoratra
Misy ny bokotra azo tsindriana, ny sarin'ity lahatsoratra ity, mba ho ampiasain'ireo mpitoraka blaogy amin'ny bilaoginy ho famantarana fa mandray anjara amin'ilay Fetibe izy ireo. Vantany vao voapetraka ao aminà bilaogy iray ny bokotra, tsy maintsy mampahafantatra izany lahatsoratra izany ilay mpitoraka bilaogy
Amin'ny faran'ny fe-potoana fandraisana anjara dia hizotra amin'ny fandaminana sy famintinana ny lahatsoratra nandray anjara izahay mba hamoahana lahatsoratra famintinana ho an'ny Global Voices. Miankina amin'ny habetsahan'ny fandraisan'anjara no hahafahanay mitanisa ireo lahatsoratra na tsia, izany dia noho ny anton'ny toerana indrindra indrindra. Ireo fanontaniana rehetra azo avantana any amin'ny mailaka voalaza etsy ambony. Ny vokatr'ireo Fetiben'ny Bilaogintsika teo aloha dia hita ao amin'ny: Kolombia, Ekoatora [es], Venezoela, ary Peroa.
Filaharana araka ny fotoana:
Ireo hetsika natao nandritra ny fetibe dia araka ny voalaza eto ambany:
- Atso, fanasana sy fampielezana. Avy amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity sy mandritra ny faharetan'ny fotoanan'ny fandraisana anjara.
- Fotoanan'ny fandraisana anjara. Ny 1 ka hatramin'ny 10 Aogositra.
- Fotoanan'ny fifantenana sy famoronana ny famintinana miaraka amin'ireo lahatsoratra nandray anjara. Ny 11 ka hatramin'ny 15 Aogositra.
- Lahatsoratra famintinana avoaka ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola. 16 Aogositra.
Fanamarihana: Tsy fifanianana ity, araka izany dia tsy misy ireo mpandresy na resy. Momba ny fitadiavana firotsahana an-tsehatra, fiaraha-miasa sy fijoroana vavolombelona amin'ilay lohahevitra naroso, mba hamoahana sary mazava tsara, miovaova sy manaraka ny toetr'andro momba ilay lohahevitra amin'ny fiaraha-monina sy ny fandraisana anjara amin'ny alàlan'ny Aterineto, any Meksika.
Fandraisana anjara tao amin'ny Twitter
Tianay ho hita sy tsy hiato ao amin'ny Twitter ihany koa izany Fetibe izany, ary araka izany dia manolotra ny tenifototra ofisialin'ny Fetibe izahay hisokatra ho an'ireo mpampiasa Twitter rehetra eto: #vocesmx
Hanao ny asa fanapariaham-baovao sy filazana rehetra mikasika ny fandraisana anjara amin'ilay Fetibe io tenifototra io, nefa tianay ihany koa ny hisian'ireo bitsika momba io lohahevitry ny Fetibe io miaraka amin'ilay tenifototra. Hanaraka izany izahay ary hisy fantina avy amin'ireo bitsika mahaliana indrindra havoakanay amin'ny lahatsoratra famintinanay.
Manantena ny fanohanana, fiaraha-miasa sy fandraisanao anjara izahay!
Soratra miverina: Messico: blogger invitati a scrivere su cittadinanza, violenza e problemi locali
[…] · Fetiben’ny Bilaogy: Meksika – Vahoaka, Herisetra ary Bilaogy […]
24 Aogositra 2011, 12:23